घुम्न जाने होइन त मनाङ ? [फोटोफिचर] - फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
- भीम घिमिरे, आश गुरुङ, मनाङ
आश्विन १५, २०७४-सडक मार्ग सहज भएसँगै गत वर्ष धेरै आन्तरिक पर्यटक मुस्ताङ पुगे । हिमाल पारिका दुइ जिल्लामध्येको मुस्ताङको भौगोलिक विविधताबारे धेरैले थाहा पाए । अब अर्को जिल्ला मनाङको यात्रा गर्दा कस्तो होला ?
प्रकाशित: आश्विन १५, २०७४
रामेछापको लखनपुरमा करेन्ट लागेर ३ घाइते ›